IMveliso yeYYWU TOYS KWIIMAKI - Yunis International Trading Co., Ltd.
Iimveliso eziphambili ze-Yiwu zeemveliso eziphambili zibandakanya iithoyi zekhathuni, izinto zokudlala zombane, iithoyi ezintle, iithoyi eziphambili, izinto zokudlala, amalaphu e-elektroniki, iithoyi ezinokuthelekiswa, iithoyi zezilwanyana, iithoyi zomthi kunye nezinto zokudlala zentsimbi.
INDAWO YOKUTHENGA YIWU
1. Kumgangatho wokuqala, kwiSithili 1, kwimarike yorhwebo lwaMazwe ngaMazwe: Amathoyizi aphambili (uMmandla C), iithoyi ezinokuthelekiswa (Indawo C), iithoyi zeKhompyutha (Ummandla C no-D), iithoyi eziqhelekileyo (Ummandla D no-E).
2. Isithili se-Yiwu sorhwebo lwamazwe aphesheya 1: Umgangatho wokuqala uthengisa iithoyi kunye nobuncinci be-odolo ubuncinci ihlala ikhatoni enye. Umgangatho ongaphandle liziko elithe ngqo lokuThengisa, elithengisa inani elikhulu lempahla.
Isithili se-Yiwu sorhwebo lwamazwe aphesheya se-1: Ummandla B Iithoyi zethamsanqa zigubungela iBooth engu-601-1200, Indawo C yokudlala Indawo D iithoyi ze-elektroniki kunye nezinto zokudlala eziQhelekileyo zigubungela iBooth No. 1801-2400, iNdawo E Izinto zokudlala eziqhelekileyo zigubungela iBooth No. 2401-3000.
3. Uninzi lwezinto zokudlala ezinkulu kunye nezinto zokudlala ezilungileyo ezenziwe kwimarike yaseGuangzhou okanye eChenghai.